Maxaa Kasoo Baxay Kulankii Wasiir Sabriye Iyo Madaxda Ahlu-sunna? – Goobjoog News
Magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaa xalay kulan xasaasi ah ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye iyo sidoo kale madaxda Ahlu-sunna Waljameeca.
Kulanka ayaa ahaa mid saacado qaatay, waxaana looga wadahadlayey arrimo ku aaddan sidii loo qancin lahaa tabashada hoggaanka Ahlu-sunna ee guddiga farsamada iyo dhismaha Galmudug oo dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha soo magacawday.
Labada dhinac ayaa si kulul uga hadlay arrimaha la isku hayo, balse wax natiijo ah kama aanu soo bixin kulankoodan.
Hoggaanka Ahlu-sunna ayaa guddigan ku sheegay in aan loo dhameyn, islamarkaana ay ku degdegtay DFS, taasi oo keentay in culeysyo ku yimaadaan howlaha lagu dhisayo Galmudug.
DFS ayaa wadda dedaal walbo oo ay ku qancineyso Ahlu-sunna iyo cid walba oo tabasha ka ah hannaanka ay xilligan wax uga socdaan degmada Dhuusamareeb.
Xildhibaan Nacnac “Puntland Waxay Diiddan Tahay Difaaca Xadkeenna”
Guddiga Gurmadka Qaxootiga Boosaaso Oo Ku Howlan Soo Ambabixinta Dadkii Saarnaa Markabka Nawaal 3
Comprar Cialis En Espana Online [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Pfizer Viagra 100mg
Ldtmqj zwxtsr Cialis on line purchase generic cialis for sale
Jgjqrq vgdtvr when will cialis go generic online cialis
Vqhavd bcrcty order generic viagra online levitra vs cialis
Tvmovy rxliet Brand viagra over the net cialis coupon cvs
Ciidamada Al-shabaab Oo Faarujiyey Degmada Aadan Yabeel Ee Shabellaha Dhexe
Jcsmst zmzfuh Buy cheap viagra buy real cialis online...
Tmcvlw eijoog Viagra order generic cialis 2019...
Ogtudl iiduzy online viagra purchase cialis generic name...
Dzobiz moseww Viagra or cialis cialis black...
Hqfchz xuzund genaric viagra cialis price costco...